Louis van Gaal Ugu yaraan 30-sano ayaan ahay Tababare weligeey leyma ganaaxin.. | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Louis van Gaal Ugu yaraan 30-sano ayaan ahay Tababare weligeey leyma ganaaxin..
Manchester United macalinkooda Louis van Gaal ayaa xaqiijiyey inuu ka dagaalami doono oo uu iska difaaci doono,qorshaha ay xiriirka FA-gu ku doonayaan iney isaga ku ganaaxaan.
Tababaraha u dhashey Dutch-ka ayaa lagu eedeeyay oo loogu hanjabay in la ganaaxi doono,isagoo lagu heeysto inuu yiri”Wax waliba” waxay ahaayeen kuwo aniga iga dhan ahaa “Kooxda,Goobta lagu dheelayey, xitaa garsooraha,kulankii koowaad ee wareega afaraad FA Cup ee Cambridge United bishii January.
Kooxda League Two kadhisan ayaa bar-baro gool la’aan ah la gashey United kulankii Abbey Stadium, laakiin Red Devils ayaa Old Trafford ku xaqiijisey ineey soo gaartay wareega shanaad ee FA Cup markii 3-0 kaga badisey kooxda yar.
FA ayaa ku eedeeyey tababare Van Gaal eedeyntiisu ay ahayd mid sarbeeb ah, oo ku socotaya garsooraha,maamulka xiriirka,taasi oo maalinta Isniinta go’aan laga soo saari doono.
laakiin Van Gaal oo la weydiiyey inuu is difaaci doono hadii go’aan ganaax ah isaga laga soo saaro waxaa uu si deg deg ah u yiri: “Dabcan Haa,waan iska difaacayaa. Waayo Aniga waxba ma sameyn,wax Qalad ah kuma hadlin. fiiri waxaan tababare ahay ugu yaraan 30 sanadood, weligeey leyma ganaaxin,waayo ma sheego ereyo xun,Mana Caroodo, waa eedeyn aan sal lahayn tani.”ayuu kusoo xirey.